technical analysis(technical analysis) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
विष्णु बस्यालको विश्लेषण–‘कारोबारको साथ छ, बजार धेरै तल झर्दैन’
काठमाण्डौ । सेयर बजारका चर्चित प्राविधिक विश्लेषक विष्णुकुमार बस्यालले बजारमा तत्काल ठूलो उछाल नआउने प्रक्षेपण गरेका छन् । बिजशालासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो प्रक्षेपण गरेका हुन् । ‘२–३ महिनाभित्रमा बजारमा ठूलै उछाल आई अलटाइम हाईलाई ब्रेक गर्ने संभावना देखिन्न ।’ उनले भने–‘तर, यो बीचमा बजार धेरै घट्ने अवस्था पनि छैन...
अब नेप्से कता जाला ? बस्याल भन्छन्–‘चाँडै २५०० सम्म पुग्नसक्छ’
काठमाण्डौ । यो साता नेप्सेले गत डिसेम्बर २ तारिखको २०७१ को विन्दूलाई ब्रेक गरी अलटाइम हाईको उचाई चुमेको छ। पछिल्लो समय नेप्से २००० देखि २१०० विन्दूका बीच नै घुमिरहेको देखिन्छ । सूचकमा उल्लेख्य सुधार नभएकाले कारोबार रकमसमेत आधा नै घटेको देखिन्छ भने कारोबार संख्यामा समेत गिरावटको क्रम जारी छ। दुई हजारदेखि २१०० विन्दूका बीच...
आगामी साताबाट नेप्से कता जाला ? यस्तो छ प्राविधिक विश्लेषकहरुको प्रक्षेपण
काठमाण्डौ । यो साता सेयर बजार केही शिथिल बन्यो । बजारमा जारी गिरावट(करेक्सन) कहिलेसम्म रहला ? र, अब आगामी दिनमा बजारको गति कस्तो रहला ? दुई प्राविधिक विज्ञहरुले यो विषयमा आफ्नो प्रक्षेपण बिजशालामार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । चर्चित सेयर बजार प्राविधिक विश्लेषक बिष्णु बस्याल आगामी आइतबार नेप्सेले २०२० को विन्दूलाई होल्ड गर्न सफल भएमा...
काठमाण्डौ । अलटाइम हाई ब्रेक गरी अघि बढेको सेयर बजार परिसूचकले आगामी डिसेम्बरभित्रै २१ सय विन्दू चुम्ने प्राविधिक विश्लेषकले नयाँ प्रक्षेपण गरेका छन् । सेयर बजारका प्राविधिक विश्लेषक बिष्णुप्रसाद बस्यालले यही डिसेम्बरभित्रै नेप्से परिसूचक २१ सय विन्दू पुग्ने प्रक्षेपण गरेका हुन् । बैंकलाई छाडेर अधिकांश सेक्टरमा अहिले प्रफिट...
काठमाण्डौ । मंसिर महिनाका कारण बाहिरी मौसम चिसो छ । तर, सेयरबजार पनि यतिबेलै तातेको छ । पछिल्लो समय नेप्से परिसूचक निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । एकैदिन ६ अर्ब बढीको सेयर कारोबारको कीर्तिमान समेत कायम भइसकेको छ । बढ्दो बजारमा लगानीकर्ताहरुको आकर्षण र लगाव पनि बढ्दै जाँदा अब बजार के होला ? भन्ने जिज्ञासा समेत उत्तिकै छ । यो क्रममा...
विश्लेषणको नाममा बजार घुमाउँदै टीए, नियमनको तयारी
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । दोस्रो बजारको लगानीलाई निकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । अझ नेपाली सेयर बजारमा त स साना विषयले समेत बजार प्रभावित भई सूचीकृत कम्पनीहरुका सेयरमूल्यमा तीव्र उत्तारचढाव देखिएको पाइन्छ । हिजोआज दोस्रो बजारमा नेप्से परिसूचकको विन्दू नै तोकेर सामाजिक सञ्जाल, युट्युब तथा अनलाइन मिडियाहरुमा प्रक्षेपण यत्रतत्र...
काठमाण्डौ । सेयर बजार कारोबार मापक नेप्से इण्डेक्समा आएको सुस्ततासँगै दैनिक कारोबार रकम स्थिर बन्दै गइरहेको बजारले लय समात्ने छाँटछाट देखाएको छैन । आम लगानीकर्ताको अपेक्षाविपरीत बजार सुस्त बन्दै जाँदा धेरैमा अन्यौल देखिएको छ । बजारको अबको दिशा कुन र कता होला भन्ने विषयमा धेरै लगानीकर्ता बिलखबन्दमा छन् । यही बेला बजारको प्राविधिक...